ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်
မုန်တိုင်းပြက္ခဒိန် (Tropical Storm Prediction and Verification)
မြို့ကြီးအချို့၏ မိုးလေဝသ အခြေအနေ
Cities on Mobile
သတင်းများ On Facebook
Dr. Tun Lwin
Myanmar Weather Watch
မြန်မာဘာသာဖြင့် - Myanmar
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် - English
တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် Link များ
SSEC Tropical Cyclone Homepage
SSEC - CIMSS
GFS Maps - UOW
Hurricane/Tropical Data UNISIS
JTWC TC Warning
Tropical Rainfall - TRMM
Intellicast Interactive Map
Clouds and ISO-bar - ထိုင်းမိုးလေဝသဌာန
WIND Graphics ASIA
WIND GRAPHICS - ASIA
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ လေတိုက်ခတ်မှု အခြေအနေ
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ လေတိုက်ခတ်မှု အခြေအနေ(wind shear)
Wind status တောင်တရုတ်ပင်လယ်
ကမ္ဘာ့ အဆိုးရွားဆုံး မုန်တိုင်းကြီး(၃၀) တွင် ဒုတိယမြောက် အမှတ်စဉ်-၉ ၌ မြန်မာနိုင်ငံအား ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားပြီး လူ့အသက်ပေါင်း တစ်သိန်းလေးသောင်းခန့်အား သေကြေပျက်စီးစေခဲ့သည့်
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး နာဂစ် ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ အောက်ပါစာရင်းတွင် မုန်တိုင်း ပြင်းအားကြောင့် အသေအပျောက် ပမာဏ အနည်းအများနှင့် အထက်အောက် စီထားကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ မူရင်း ဇယားအား WUND မှ ရယူပြီး ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားပါသည်။
The 30 Deadliest Tropical Cyclones in World History
Name / Areas of Largest Loss
Great Bhola Cyclone, Bangladesh
Hooghly River Cyclone, India and Bangladesh
Haiphong Typhoon, Vietnam
Backerganj Cyclone, Bangladesh
Great Backerganj Cyclone, Bangladesh
Super Typhoon Nina, China
Cyclone 02B, Bangladesh
Great Bombay Cyclone, India
Hakata Bay Typhoon, Japan
Sunderbans coast, Bangladesh
Bengal Cyclone, Calcutta, India
Backerganj (Barisal), Bangladesh
Great Hurricane, Lesser Antilles Islands
Devi Taluk, SE India
Great Coringa Cyclone, India
1965 (11 May)
Nagasaki Typhoon, Japan
1965 (31 May)
Death counts from large killer cyclones are highly uncertain, particulary for those before 1900. The above rankings are somewhat speculative. Information sources: Banglapedia, Wikipedia, Climate change impacts and adaptation assessment in Bangladesh" by Anwar Ali, and Encyclopedia of Hurricanes, Typhoons, and Cyclones (1999), by David Longshore.
ဇယားအမှတ်စဉ်(၁) ထိပ်ဆုံးတွင် ၁၉၇၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် Great Bhola ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြီးကြောင့် Ganges–Brahmaputra Delta ဒေသမှ လူပေါင်း ၅သိန်းနီးပါးမျှ သေကြေပျက်စီးကြရသည်အထိ ဆိုးရွားပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်း သိရှိမှတ်သားရပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်း၌ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အဖြစ် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ ပိုမို အားကောင်းလာခဲ့ပြီး လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁၁၅ မိုင်(၁၈၅ ကီလိုမီတာနှုန်း) ရှိသည့် အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးအဖြစ် ကမ်းခြေသို့ ဖြတ်ကျော် တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းရိုက်ခတ်ပြီး ရေလွှမ်းမိုးမှုများကြောင့် လူအမြောက်အများ သေဆုံးကြရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်းများတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဇယားတွင် လူသေပျောက်မှု အများဆုံး မုန်တိုင်း ၃၀ ကိုဖေါ်ပြထားရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ (၁၂ ကြိမ်) ရှိခဲ့ပြီး အသေအပျောက်အများဆုံး စံချိန်တင်ထားကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထူးခြားသည့် အချက်တစ်ချက်အနေဖြင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် မုန်တိုင်းများသည့် အထက်ပါ မုန်တိုင်းအလုံး(၃၀) စာရင်းတွင် (၂၂)လုံး အထိ ပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဆိုင်ကလုန်း 02B တိုက်ခတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးမှု လျော့ကျသွားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ(၂) ရက်နေ့၌ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း နာဂစ်ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေမှာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်ပြီး ချောင်းမြောင်းထူထပ် ရှုပ်ထွေးကာ၊ လူဦးရေ ထူထပ်သည့်မြို့များ ရွာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ဒေသဖြစ်ခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအားနည်းခြင်းနှင့် ကြီးမားသော မုန်တိုင်း၏ အဖျက်စွမ်းအားကို ကြုံတွေ့နားလည်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် လူအသေအပျောက်များပြားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး နာဂစ် သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် ရုတ်တရက် အင်အား အလွန်ကောင်းလာခဲ့ပြီး၊ အချင်း ၁၂ မိုင်ခန့်ရှိသည့် မုန်တိုင်း မျက်စေ့ကိုလည်း ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်လာခဲ့ရကြောင်း၊ မေလ ၂ ရက် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းအား ချဉ်းကပ်လာစဉ် အားအပြင်းဆုံး အခြေအနေ(လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၂၁၅ ကီလိုမီတာ - ၁၃၅ မိုင်နှုန်း အထိရှိလာသည်ဟု JTWC မှ ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း၊ အိန္ဒိယ မိုးလေဝသဌာန IMD က လေတိုက်နှုန်း (တစ်နာရီ ၁၆၅ ကီလိမီတာ - ၁၀၅ မိုင်)ဟုသာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအား ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်စဉ် အမြင့်ဆုံး လေတိုက်နှုန်းဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wiki မှတ်တမ်းအရ သိရှိရပါသည်။ - ကျမ်းကိုးဖတ်ရန် -
မုန်တိုင်းကြီးများ တိုက်ခတ်ခံရပြီး အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မုန်တိုင်းဒဏ်မှ လွတ်ကင်းအောင် လူထုပညာပေးနည်းလမ်း များစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်နည်းတူ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း နာဂစ်တိုက်ခတ်မှု ခံရပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးပျက်စီးမှု နည်းပါးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသ၊ ကျောက်ဖြူမြို့ကို ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဂီရိ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်စဉ် မှတ်တမ်းများအရ ကျောက်ဖြူဒေသမှ လူပေါင်း ၅၃,၀၀၀ ကျော်ကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ကယ်ဆယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၅၇ ဦးသာ သေဆုံးခဲ့ရကာ၊ လူပေါင်း ၇၀,၀၀၀ ခန့် ၏ နေအိမ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ JTWC ခန့်မှန်းချက်များအရ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဂီရိသည်၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက် နေ့တွင် ကျောက်ဖြူမြို့မြောက်ဘက် မိုင် ၃၀ ကျော်ခန့်မှ ကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ချိန်၌ အင်အား အကောင်းဆုံး အခြေအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အဆင့်-၅ (CAT-5) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဆင့်နီးပါးမျှရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဗဟိုဖိအား 922 mbar(hPa) (or) 27.23 inHg အထိကျဆင်းခဲ့ပြီး၊ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၂၅၀ ကီလိုမီတာနီးပါး(၁၅၅ မိုင်နှုန်း)အထိရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သည့် မုန်တိုင်းများအနက် အားအပြင်းဆုံး မုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း စံချိန်တင် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ ပါသည်။ - ကျမ်းကိုးဖတ်ရန် -
MMWeather သည် နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မိမိတို့ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှဖြင့် နားလည်တတ်ကျွမ်းမှု မရှိသည့် မိုးလေဝသပညာကို - တတ်ကျွမ်းနားလည်သော မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဝါရင့် မိုးလေဝသ ပညာရှင်ကြီးများ၏ ဟောပြောပို့ချချက်များမှ ရရှိသည့် ဗဟုသုတ၊ အင်တာနက်မှ ရရှိသည့် ဗဟုသုတတို့ ပေါင်းစပ်ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအကြောင်းကို လေ့လာလိုက်စားနေသည့် ဝါသနာရှင်များဖြင့် စုဖွဲ့ထားပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများမှ ရရှိသည့် အတွေ့အကြုံများကို ပြည်သူလူထုထံသို့ အီလက်ထရွန်နစ် မီဒီယာ နည်းလမ်းဖြင့် မျှဝေရရှိစေခြင်းငှာ ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်နေသည့် ဝါသနာရှင် အစုအဖွဲ့လေးတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြောင့် လူသားများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ကင်းဝေးလွတ်မြောက်ကြစေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်သည် MMWeather စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု တင်ပြသည့် ကမ္ဘာ့ အသေအပျောက်အများဆုံး မုန်တိုင်းကြီး ၃၀ စာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသာမက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးတို့၏ နိုင်ငံများကို မပါဝင်ကြစေလိုပါ။ ထိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှ ကင်းဝေးလွတ်မြောက်ကြစေရန် မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတို့သည်လည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသိပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြစေရန် အစဉ်တစိုက် လေ့လာနေကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက် တိုက်တွန်းလျှက် နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။ MMWeather ပရိတ်သတ်အပေါင်းအား အစဉ်လေးစားလျှက်